Si dulqaad leh ugu sugaya iftiinka 18 (ama 19), iyo inta aad akhrinaysid # 2 ee Hackers-ka asalka ah | Laga soo bilaabo Linux
Qoraalkan waxay ahayd inaan qoro toddobaad kahor laakiin weli maan dareemin qancin. E18 wali ma soo bixin laakiin waxa hubaal ah in usbuuc ka hor waxa soo baxay uu ahaa nooca 1.8 ee maktabadaha EFL iyo maalmo ka hor nooca 0.4 ee eray bixinta.
Dhinac EFL 1.8: Waxay go'aansadeen inay mideeyaan dhammaan maktabadaha hal xirmo, marka lagu daro ku darista maktabad loogu talagalay mashiinka jirka, maktabad kale oo loogu talagalay taageerada codka, waxaa suurtagal noqon doonta in la soo saaro thumbnails dukumiintiyada Libreoffice, mawduuca aasaasiga ah waa la rogay oo waxaa jira taageero loogu talagalay Wayland 1.3.
Ku saabsan Erey bixinta, horeyba waxay uheleen taageero 256 midab, iskudhafka gadaal gadaal, hagaajinta iyo cayayaanka go'an. Waa tan muunad ay ka tageen.
Deegaan qaatay 12 sano in la sii daayo nooca 17 si loo helo maktabado cusub 12 bilood gudahood waa horumar badan. Haddayna intaas ku filnayn, waa la filayaa taas bisha Febraayo 2014 nooca EFL 1.9 ayaa la sii daayaa.
Sidoo kale Cadadka 2-aad ee Hacker-ka asalka ah ayaa soo baxay, Magazine-ka Eugenia Bahit oo leh mowduucyadan:
Dib-u-habeynta injineernimada: Soo saarista softiweerka ee lagu dabaqayo injineernimada rogadka: farshaxanka sayniska
Qoraalka Python: Maareynta Faylasha Qaabeynta Iyadoo La Isticmaalayo Configparser
Injineernimada softiweerka: Ku darida Faylasha Cron Iyo Fulinta Waqtiyeed ee Nidaamyada Baakadaha .Deb
Shaybaarka Mashiinka Europio: Sidee Loo Sameeyay Maktabadda Aaladda 'Hacker Library Web ABMs'?
Amniga Kumbuyuutarka: Lakabyada Amniga Smart-ka ee PHP - Nadaafadda Super Global Array $ _POST
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Si dulqaad leh ugu sugaya Iftiinka 18 (ama 19), iyo inta aad akhrinaysid # 2 ee The Hacker Asalka ah
Taageerada buuxda ee Wayland waxaa sidoo kale laga filayaa nooca E19 iyo nooca E18 halkaasoo taageero qayb ahaan ah
Qalbigay ku ridayaan, waxay ahayd waqti ku saabsan qaybta E ... magacaas marwalba wuu waalan yahay.
Hagaag, markaan arkay sida nuqulkii ugu dambeeyay ee E17 uu u soo baxay, aniga waxay ila tahay inaan wali filan karno wax yar. Waxaan arkay wali cagaar. Maamulaha faylka wali waa toy, astaamaha
Shabakadda ma guuri karaan, wali waxay la il daran tahay xoogaa xasillooni darro ah, iwm.
Hadda, isagu waa dhakhso, quruxsan yahay, iyo iftiin sidiisa oo kale ah, laakiin isagu malaha qaan gaar.
Ku jawaab Fedoriano
Hal codsi (ama dhowr ah) go'aan kama gaari karaa mustaqbalka Nidaamka Howlgalka?
La ciyaar GIMP: Khadadka Awoodda